[Review] Dầu gội Weilaiya xanh, nâu có tốt không? Chi tiết | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Dầu gội Weilaiya xanh, nâu có tốt không? Chi tiết | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Dầu gội Weilaiya xanh, nâu có tốt không? Chi tiết | Muasalebang in Muasalebang
I-shampoo ye-Weilaiya Ingenye yemikhiqizo ethandwa kakhulu yokunakekelwa kwezinwele nokuhlanza emhlabeni namuhla. Kodwa-ke, kusenabantu abaningi abadidekile ngokusetshenziswa komkhiqizo futhi abazi ukuthi bahlukanise kanjani owangempela nowomgunyathi. Bheka isihloko esilandelayo ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe okuwusizo ngawe!
1 Ishampu ye-ginger ye-Weilaiya evela kuliphi izwe?
2 Ingabe i-shampoo ye-Weilaiya yangempela ilungile?
3 Ukubuyekezwa komugqa we-shampoo wekhwalithi owaziwa kakhulu we-Weilaiya
3.1 Izithako zomkhiqizo
3.2 Iphunga elimnandi
3.3 Isebenza ngempumelelo
3.4 Into yomsebenzisi
3.5 Intengo yomkhiqizo
4 Hlukanisa i-shampoo yangempela ye-Weilaiya – inkohliso
Ishampu ye-ginger ye-Weilaiya evela kuliphi izwe?
I-Weilaiya ingenye yemikhiqizo ephefumulelwe uhlobo oludumile lwe-salon yaseJalimane. Lolu hlobo lwaziwa ngokuthi “iNkosi” embonini yokunakekelwa kwezinwele yase-Hong Kong futhi lubophezelekile futhi lwakhiwe yi-Guangzhou WeilaiYa Biology Technology Co, Ltd.
Ngombandela wokuhlinzeka abesifazane ngemikhiqizo yokunakekelwa kobuhle bezinga eliphezulu, i-Weilaiya idale idumela elihle hhayi ezweni kuphela kodwa futhi yasakazekela emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Ngaphandle kwalokho, imikhiqizo yalo mkhiqizo yonke i-100% yemvelo. Kuhlanganiswe nalokho ukukhiqizwa kolayini nobuchwepheshe besimanje, ngakho kuphephe kakhulu futhi kunobungane empilweni yabathengi.
Ngo-2005, i-Hong Kong nayo yabhalisa amalungelo akhethekile alolu phawu futhi yathobela umgomo “wokuphathelene nempilo nobuhle njengento yokuqala yokuthuthukiswa”. Njengamanje, inkampani inemikhiqizo ye-8 yamasu futhi isethi ye-shampoo ye-Weilaiya ingelinye lamagama aziswa kakhulu ngabasebenzisi ngekhwalithi yayo.
Ingabe i-shampoo ye-Weilaiya yangempela ilungile?
Ingabe i-shampoo ye-Weilaiya yangempela ilungile? Lona umbuzo abantu abaningi abawubuzile lapho befunda ngalo mugqa womkhiqizo. Nokho, ukuze ukwazi ukuhlola umugqa womkhiqizo muhle noma cha kuncike ezintweni eziningi ezahlukene. Kuyo, singabala okufana nalokhu: Izithako, ukusetshenziswa, izindleko, …
Ingabe i-shampoo ye-Weilaiya yangempela inhle umbuzo abantu abaningi abawubuzile
Kodwa ngokujwayelekile, I-shampoo ye-Weilaiya umugqa womkhiqizo ocwaningwayo futhi wathuthukiswa ochwepheshe abahamba phambili emanyuvesi ezokwelapha ahamba phambili ngokuhlanganyela namalabhorethri ocwaningo aseJalimane adumile. I-Weilaiya isebenze ngempumelelo ekususeni amafutha nenkwethu ekhanda. Ngesikhathi esifanayo, gcina futhi ugcine ibhalansi yamanzi ezinwele. Kuhlanganiswe namavithamini E kusiza izinwele ukuba ziqine kusukela empandeni ziye phezulu futhi zibhalansise uwoyela, okwenza izinwele zibe mkhulu futhi zibe mnyama. Ngakho-ke, lokhu kungumugqa womkhiqizo abesifazane abanezinkinga zezinwele akufanele banganaki.
Buka Okuningi: [Review] I-TOP 10 ye-shampoo esebenza kakhulu yokulwa ne-dandruff namuhla
Ukubuyekezwa komugqa we-shampoo wekhwalithi owaziwa kakhulu we-Weilaiya
Iqaphela ukunambitheka kwamakhasimende namuhla, inkampani ibilokhu ithuthukisa kokubili ngokwekhwalithi nokuklama kwalo mugqa womkhiqizo. Ngokuqondile, i-shampoo ye-Weilaiya njengamanje inemigqa emibili edumile: I-Weilaiya ginger conditioner enombala oluhlaza nesigxivizo esimhlophe sezinwele ezomile kanye ne-Weilaiya ene-ginger conditioner eluhlaza okotshani nesigxivizo esinsundu sezinwele ezinamafutha. Nazi izibuyekezo ezinemininingwane eminingi yale migqa yomkhiqizo emibili okufanele ubhekisele kuyo ukuze uthole ukubuka okunenjongo kakhulu:
I-Weilaiya Ginger Conditioner Shampoo okwamanje isatshalaliswa emakethe yobumba ngezinhlobo ezi-2 ezinemibala emi-2 ehlukene: isitembu esinsundu esiluhlaza okwesibhakabhaka nesitembu esimhlophe esiluhlaza okwesibhakabhaka. Izithako eziyinhloko zemigqa yomibili yomkhiqizo zihlanganisa amakhambi emvelo ngokuphelele. Kuyo, singabala izingxenye eziyinhloko ezifana nalezi:
I-fresh Ginger Extract: Inamandla okukhuthaza ukukhula kwezinwele, isiza izinwele zikhule ngendlela engcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lesi sithako sinomphumela wokuthambisa nokusiza ukwenza izinwele zibe namandla, zibushelelezi futhi zivimbele ukulahlekelwa izinwele. Akukhona lokho kuphela, i-ginger iyaziwa nangokuthi inamandla okubulala amagciwane ayingozi esikhumbeni futhi uphathe izinkinga ze-scalp kanye ne-scalp ezifana nokuluma, ukuvuvukala, ukhunta … ngempumelelo.
Ukukhipha: Leli yigama elingasaxakile ezinweleni ezimnyama, okusiza ukondla kahle izinwele ukusuka empandeni kuye kwesinye. Ngaphandle kwalokho, ukukhishwa kwe-Ha Thu O kusiza futhi ukuthuthukisa umsebenzi we-SOD ukuhlanza ngokuphelele izinwele zezinwele kanye nokulawula uwoyela ngempumelelo.
I-Lavender Extract (i-Lavender): Lesi yisithako esinezinto ezilwa nokuvuvukala futhi ezipholile, ngakho-ke kuhle kakhulu ohlelweni lokuthuthukisa izinkinga zokuvuvukala kwe-scalp nokuluma. Ikakhulukazi, ukukhishwa kwe-lavender nakho kunezindawo zokulwa namagciwane, ngakho-ke kuzolawula kahle isimo se-scalp fungus.
Amafutha e-Olive: Lesi sithako sizosiza ukugcwalisa umswakama odingekayo ukuze wenze izinwele ziqine futhi zivimbele ukoma, ukuhlukana noma ukuphuka … Ngaphandle kwalokho, amafutha omnqumo aqukethe inani elikhulu lama-antioxidants avela ku-vitamin E. no-K. Ngakho-ke, aphumelela kakhulu ekuthuthukiseni impilo yesikhumba sekhanda. kanye nezinwele.
Amaprotheni hydrolases: Lesi sithako sisetshenziselwa ukuhlinzeka ngemisoco ebalulekile ukubuyisela i-scalp eyonakele nezinwele zezinwele. Ngesikhathi esifanayo, yondla izinwele kusuka empandeni kuya phezulu ngokuphelele.
Nakuba, babe izithako ezifanayo kodwa I-shampoo ye-Weilaiya eluhlaza okwesibhakabhaka nemhlophe ikhiqizwa ubuchwepheshe bendabuko, kuyilapho i-shampoo ye-Weilaiya eluhlaza nensundu isetshenziswa ngobuchwepheshe bokukhipha isikhutha esiyingozi kakhulu.. Kuhlanganiswe nalokho ubuchwepheshe bokukhipha ingcindezi ebandayo. Ukusuka lapho, izoletha kubasebenzisi umkhiqizo ohlaba umxhwele kakhulu nekhwalithi esebenza kahle kakhulu.
Njengoba isithako esiyinhloko sikhishwa ku-ginger entsha, iphunga eliyinhloko lale shampoo futhi iphunga lejinja. Nokho, kube nabantu abaningi abakhathazekile ngokuthi leli phunga lizobangela ukungakhululeki nokugxilisa ingqondo kubasebenzisi. Kodwa empeleni, iphunga le-ginger liye lalungiswa ngumenzi, ngakho-ke limnene, likhululekile futhi ikakhulukazi alishisi isikhumba esinamafutha uma sisetshenziswa.
Ngaphandle kwe-ginger, umkhiqizo ubuye ube nenani lezinye izithako ezisebenzayo ezifana namaminerali, amafutha abalulekile embali, ahlanganiswe nama-vitamin compounds. Konke kuhlanganiswe ndawonye futhi kwakha iphunga elifanelana nokuthandwa kweningi labasebenzisi. Ngesikhathi esifanayo, ulethe umuzwa wokuhlonishwa nokukhangayo.
Inkomba: Ama-shampoos aphezulu ayi-10 angcono kakhulu okwelapha ukulahleka kwezinwele futhi akhuthaze ukukhula kwezinwele
I-shampoo ye-Weilaiya Ikhishwa ezithakweni zemvelo futhi ayinawo amakhemikhali, ayinawo ama-preservatives, ngakho yenze abasebenzisi bazizwe bejabule lapho beqala ukuyisebenzisa. Ngakolunye uhlangothi, i-Weilaiya iphinde isetshenziswe ngobuchwepheshe besimanje futhi obuphambili bokukhiqiza, ngakho-ke ayigcini nje ngokuba nephunga elithambile, eliphephezelayo kodwa futhi isiza ukuqinisa nokushelela izinwele kusukela empandeni kuya kwesinye ngemva kokusetshenziswa.
Kulabo abavame ukuphathwa ikhanda ngenxa yokuqothuka kwezinwele, ukugogeka, nokunamathela, ngemva kokuyisebenzisa, bangaba nokuzethemba okwengeziwe lapho bebonisa ukukhazimula nokuntanta abebekulangazelela. Ngaphandle kwalokho, ngenxa yamavithamini, amaminerali, i-ha tho wu kanye nesithako se-ginger esivelele, le shampoo ibuye isize ukwenza izinwele zibe mnyama.
Ikakhulukazi, I-shampoo ye-Weilaiya Iphinde iphumelele kakhulu ekondleni nasekubuyiseleni izinwele ezilimele ezibangelwa ukusetshenziswa kokushisa namakhemikhali afana nokugoqa, isitayela sokushisa, ukucindezela, ukudaya noma ukungcoliswa kwemvelo. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo usiza ukususa ukungcola esikhumbeni, uhlanze inkwethu futhi usize izinwele zihlanzeke. Ngesikhathi esifanayo, ukwengeza izakhi ezibalulekile ukusiza izinwele zibe thambile, ziqine futhi zicwebezele.
Ngokungafani neminye imigqa yomkhiqizo we-shampoo emakethe, I-shampoo ye-Weilaiya ingafaneleka kubo bonke abasebenzisi. Ngoba izithako zomkhiqizo zikhishwe ngokuphelele emakhambi emvelo. Kuhlanganiswe nalokho kuyinqubo yokukhiqiza yendabuko ehlanganiswe nobuchwepheshe besimanje. Ngakho-ke, iphephile, ilungile futhi iletha i-Weilaiya ephumelelayo uma isetshenziswa.
Njengamanje, i-shampoo ye-ginger ye-Weilaiya isetshenziswa kahle kakhulu kubantu abanjengalaba: Abantu abanezinkinga zezinwele ezihlanganisa: ezomile, eziqinile, ezihlukene; abesifazane bangemva kokubeletha noma labo abanesikhumba esinenkwethu eningi, izinwele ezingaphili, ezicwebezelayo ezinamafutha; abantu abadinga ukukhulisa izinwele zabo ngokushesha, ukuqothuka kwezinwele ezinzima noma abalinyazwa kakhulu ukusetshenziswa kokushisa namakhemikhali ukwenza izinwele zabo.
Njengamanje, i-shampoo ye-ginger ye-Weilaiya ithengiswa kakhulu emakethe kanye nasezingosini ze-e-commerce. Iqoqo lemikhiqizo ye-shampoo ye-Weilaiya kanye ne-conditioner izofaka ibhodlela elingu-1 le-conditioner (200ml), ibhodlela elingu-1 le-shampoo (312ml) futhi umsabalalisi okwamanje uyifaka ohlwini ngentengo ye-760,000 VND / isethi futhi ukukhushulwa kungu-680,000 VND/set kuphela. setha.
Mhlawumbe unentshisekelo: [Review] TOP 3 I-Biotin Collagen shampoo enhle, okufanele isetshenziswe?
Hlukanisa i-shampoo yangempela ye-Weilaiya – inkohliso
Okwamanje, Isethi ye-shampoo ye-Weilaiya kanye ne-conditioner uthandwa abantu abaningi. Ngakho-ke, emakethe, isimo sokwenza izimpahla zomgunyathi, izimpahla zomgunyathi, nezimpahla ezisezingeni eliphansi nazo zaba nethuba lokuthuthuka kabanzi. Ngakho-ke, ukuze uqinisekise ukuphepha nokusebenza ngempumelelo lapho usebenzisa, udinga ukuzihlakulela ulwazi oluyisisekelo ukuze uhlukanise izimpahla zangempela nezingelona iqiniso. Ngokulandelayo:
Izimpahla zangempela zizoba nezikhwama zepulasitiki ezizacile, ezisobala, kanti izimpahla zomgunyathi zizoba nzima futhi zingabonakali.
Umzimba webhodlela le-shampoo ye-Weilaiya yangempela, usuku lokuphelelwa yisikhathi luphrintwa phakathi naphakathi kwe-logo yomkhiqizo, futhi ngezimpahla zomgunyathi, iphrintiwe ohlangothini olulodwa.
Imikhiqizo yangempela mayelana nokuthungwa komkhiqizo izoba minyene, uma ucindezela kancane, umkhiqizo uzogeleza uphume ngendlela eyi-cylindrical efana nokuthungwa komlomo webhodlela, futhi ngezimpahla zomgunyathi, ukuthungwa kuzoba okuxekethile.
Imikhiqizo yangempela izokhishwa ku-ginger, ngakho-ke kuyoba nephunga lesici le-ginger, kodwa leli phunga liphumule kakhulu, alinamandla kakhulu, libangela ukungahambi kahle. Ngokungafani nezimpahla zomgunyathi, iphunga lamakhemikhali lizodlula iphunga lejinja.
Nansi imininingwane esabelana ngayo I-shampoo ye-Weilaiya. Ngethemba, ngalokho, abafundi bathole ulwazi oluwusizo kakhulu ngokwabo lapho bekhetha imikhiqizo yokusiza ukubuyisela izinwele zabo ezilimele nezomile. Ufisa ukuba nezinwele ezibushelelezi nezithambile njengoba uthanda.
Xem Thêm [Review] Mặt nạ mắt Images có hiệu quả trị thâm mắt không? | Muasalebang
Thai nhi 4 tuần tuổi phá thai có an toàn không? | Muasalebang
Cách đặt video làm hình nền điện thoại iPhone [Chi tiết] | Muasalebang